मन्दिरबाट वृद्धाको सुनको चेन गायब, अनी त्यसपछी के भयो तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ... - मन्दिरबाट वृद्धाको सुनको चेन गायब, अनी त्यसपछी के भयो तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ... -
मन्दिरबाट वृद्धाको सुनको चेन गायब, अनी त्यसपछी के भयो तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ…
उज्यालो प्रतिनिधि २ चैत्र २०७८, बुधबार फोटो समाचार
काठमाडौँ ।घटना छिमेकी मुलुक भारतको हो । केरलाको कोल्लम जिल्लाको कोत्तरकारा निवासी सुभद्रा गत मार्च १२ मा सदाझैँ मन्दिरमा पूजा गर्न गइन् । तर पूजा गर्दागर्दै सुभद्रासँग दुर्घटना भयो, जसका कारण उनी निकै विचलित भइन् । भगवानको पूजा गर्दागर्दै ६८ वर्षकी सुभद्राको सुनको चेन कसैले खोस्यो । उनले आफ्नो कमाइबाट यो चेन किनेका हुन् । यसबाट सुभद्रा निकै दुःखी भइन् र त्यहीँ रुन थालिन् । तर त्यसपछि के भयो त्यो पत्याउनै नसकिने थियो।
अपरिचित महिलाले दिए सुनका चुरा
इन्डिया टाइम्सको समाचार अनुसार आँखा भरी आँसु लिएर सुभद्राले मन्दिर परिसरमा आफ्नो सुनको चेन खोजिरहेकी थिइन् तर कतै भेटिनन् । त्यसपछि एउटी अपरिचित महिला उनी कहाँ आएर आफ्नो हातबाट सुनका दुईवटा चुरा निकालेर सुभद्रालाई दिँदै भनिन्, ‘यसले नयाँ सुनको चेन किनेर मन्दिरमा पुजा गर।’
त्यो अपरिचित महिला बेपत्ता भयो
ती महिलाको कुरा सुनेर सुभद्रा छक्क परिन् । उनले महिलाको नाम सोध्न अघि, उनी अर्की महिलासँगै भीडमा हराए। सुभद्राले ती महिलालाई लगातार आवाज दिइन्, तर उनी कतै भेटिनन् । त्यसपछि सुभद्रा आफ्नो घर फर्किइन् ।
सबै आश्चर्यचकित भए
सुभद्राले अपरिचितले भनेजस्तै गरिन् । दुवै सुनका चुरा बेचेपछि उनले आफ्नो लागि नयाँ सुनको चेन किनिन् र चैत १४ गते मन्दिरमा आएर भगवानको पूजा गरेकी थिइन् । मन्दिरमा नै सुभद्राले आफूसँग भएको घटनाबारे सुनाइन् । उनी त्यो अपरिचित महिलालाई भेट्न चाहन्थिन्।
सुभद्राको कथा इलाकामा फैलिएपछि ती दयालु अपरिचित महिलाको बारेमा थाहा पाउन सबैलाई बेचैनी भयो, उनी को हुन् ? मन्दिरमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामेराले महिलाले एउटै रंगको सारी र मास्क लगाएको देखाएको छ, तर उनी को हुन् ? कहाँबाट आएको हो थाहा भएन ।
यसरी थाहा भयो एक अपरिचित महिलाको बारेमा
यो खबर सामाजिक सञ्जालमा पनि आगोको दिशामा फैलियो । अन्ततः, मार्च १५ मा, स्थानीय मिडियाले अपरिचित व्यक्ति फेला परेको रिपोर्ट गरे। महिलाको पहिचान अलाप्पुझा जिल्लाको चेरथला निवासी श्रीलथाको रूपमा भएको थियो। श्रीलताले सुरुमा मिडियाको अगाडि आउन इन्कार गरिन् तर पछि सुभद्रालाई सुनका चुरा दिएकी थिइन् ।
रिपोर्टका अनुसार श्रीलताले आफूले केही विशेष काम नगरेको बताउँछिन्, सुभद्रालाई समस्यामा परेको देखेकी थिइन्, त्यसैले उनले त्यो समयमा आफूलाई जे ठीक लाग्यो त्यही गरेकी थिइन् । श्रीलताका अनुसार उनी कोट्टकरामा आफन्तलाई भेट्न जाँदै थिए । यसै क्रममा उनी आफन्तसँग मन्दिर पनि गइन् ।